NYI LYNN SECK 18+ DEN: ဝင်းမင်းသန်း နောက်ဆက်တွဲ
Posted by NLS at 3/21/2012 02:18:00 PM
6 Responses to “ဝင်းမင်းသန်း နောက်ဆက်တွဲ”
သော်တာဆွေရဲ့ ဝတ္ထုတိုတစ်ပုဒ်ထဲမှာ တစ်ခါတွေ့ဖူးတယ်။ အဲဒီကတည်းက ပါပယ်ပလိန်းကို ကြည့်ချင်လို့ လိုက်ရှာတာ ဟိုးတလောကမှ ပန်းဆိုးတန်းက အခွေဆိုင်မှာ တွေ့တယ်။
Thanks for sharing. I never watched that movie though I heard about it since my childhood. Hope to manage to see it soon.
မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ အိနြေ္ဒသိက္ခာကို ကမ္ဘာကသိအောင် ပြနိုင်ခဲ့လို့ နိုင်ငံတကာက ချီးကျုးလေးစားခဲ့ရပေမဲ့ ကိုယ့်ပြည်တွင်းက မီဒီယာတွေကြောင့် အရှက်တကွဲဖြစ်ရတဲ့ မင်းသမီးအတွက် တကယ်ကို စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းဆိုတာလည်း လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝကိုပါ သတ်နိုင်တဲ့အထိ အစွမ်းထက်တာမို့ မှန်ကန်တိကျ သေချာတဲ့ သတင်းဖြစ်ဖို့တော့ စာနယ်ဇင်း မီဒီယာ သမားတိုင်း အားထုတ်သင့်တယ် လို့ မြင်ပါတယ်။
အဲလိုသာ ပြောနေကြတာပါ မချောရယ်။ ကျွန်တော် အဲဒီရုပ်ရှင်ကြည့်တော့ သူသရုပ်ဆောင်နေတဲ့ပုံက မခို့တရို့နဲ့ မင်းသားကို မြှူနေသလိုလို၊ ပဲပေးနေသလိုလို။ ၀တ်စားတာတော့ လုံခြုံပါတယ်။
More infos related with "Purple Plain":